Uhlelo Lokuvimbela Ukuwa / Ukuzula - Izixazululo ze-OMG
Fall / Wandering Prevention System
Khipha umsindo we-alamu ekamelweni
Isebenza ngamapayipi angenazintambo, izihlalo zesikhala, amacu okusika kanye nezinsimbi ezingenazintambo ezivumela ukuthi i-Monitor esitokisini ibekwe esiteshini sabahlengikazi - kude nomuntu ohlala kuyo, ngaleyo ndlela iqede umsindo we-alamu ekamelweni.
Umnakekeli angabuye aziswe nge-pager ukuthi ibonisa ukuthi iyiphi inzwa esebenze isaziso. Lokhu kwenza umnakekeli abe khona eminye imisebenzi kodwa angacelwa uma ohlala edinga usizo.
Yazi ukuthi ubani odinga usizo
I-Central Monitor isaziso somnakeki esiteshini sabahlengikazi noma umsizi wokunakekelwa nge-pager ngokubonisa okuzwakalayo nokubukwayo okubonisa ukuthi ubani ovela ku-alamu.
Ukuvumelanisa ukuvimbela ukuwa kwakho kanye nezidingo eziphikisayo. Engeza izingxenye ezingenantambo ezingeziwe ohlelweni olufana nezinkinobho zezingcingo (OMG433-NC), ama-floor mats, nama-motion sensors (OMG433-MS).
Isebenza ngezinkinobho zokushayelwa kwabahlengikazi ezingenantambo (i-OMG433-NC), amacansi aphansi, amaphedi embhede, ama-pads esihlalo, nezinzwa zokuhamba (OMG433-MS).
I-Central Monitor ingafakwa esiteshini somhlengikazi ukuze ixwayise abanakekeli lapho izakhamuzi zidinga usizo.
Ama-alamu esiteshini sabahlengikazi noma enye indawo ephakathi ngokuzwakalayo nokubonisa kubonisa ukuthi ubani owakhiphe i-alamu.
Umnakekeli uyakwaziswa ngesikhathi esifanayo kumnakekeli wokunakekelwa.
Inkinobho yokushayela umhlengikazi ivumela ohlalayo ukuba abize umnakekeli nganoma isiphi isikhathi, ukuvuselelwa kwe-push-button kudlulisela isignali ku-Central Monitor kanye nomnakekeli wezinsizakalo ngesikhathi esifanayo, ingafakwa ku-headboard noma igqoke nge-lanyard.
Ukubuka okuphelele kwe-4494 Ukubuka kwe-1 Namuhla